ကိုရီးယားက မြန်မာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ကိုရီးယားက မြန်မာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြ
ကိုရီးယားက မြန်မာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြ
ရခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ARSA အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပွဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲတခုကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးခွဲ ရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲကို ကိုရီးယားရှိ မြန်မာ ၂၀၀၀ ကျော် ပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဆိုးလ်၊ ဘူချွန်း၊ အင်ချွန်း၊ ဘူဆန်၊ ဂင်မဲ၊ ဂွမ်ဂျူး၊ ဖျောင်းထက်၊ ယွီဂျွန်ဘူ၊ အန်ဆန်း၊ မြို့များရှိ မြန်မာအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ တက်ကြွသူများ စုပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ကိုရီးယားကလာတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာနိုငိငံသားများရဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ ပိုစတာ ကြွေးကြော် သံများကို ကိုရီးယား၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သုံးဘာသာနဲ့ ရေးသား ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ကုလသမဂ္ဂရုံး တာဝန်ရှိသူထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
………………………. ။ ။ …………………….
ကိုရီးယားက မွနျမာတှေ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံဆန်ဒပွ
ရခိုငျမှာအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျခဲ့တဲ့ ARSA အကွမျးဖကျသမားတှကေို ကနျ့ကှကျရှုတျခပြှဲနဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံကွောငျး ဆနပွပှဲတခုကို စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျက ကိုရီးယားနိုငျငံ၊ ဆိုးလျမွို့ ကုလသမဂ်ဂရုံးခှဲ ရှမှေ့ာ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဆန်ဒပွပှဲကို ကိုရီးယားရှိ မွနျမာ ၂၀ဝ၀ ကြျော ပါဝငျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွပွီး ဆိုးလျ၊ ဘူခြှနျး၊ အငျခြှနျး၊ ဘူဆနျ၊ ဂငျမဲ၊ ဂှမျဂြူး၊ ဖြောငျးထကျ၊ ယှီဂြှနျဘူ၊ အနျဆနျး၊ မွို့မြားရှိ မွနျမာအသငျးအဖှဲ့မြားနဲ့ တကျကွှသူမြား စုပေါငျးပါဝငျခဲ့ကွတယျလို့ ကိုရီးယားကလာတဲ့ သတငျးတှမှော ဖျောပွပါတယျ။
ကိုရီးယားရောကျ မွနျမာနိုငိငံသားမြားရဲ့ သဘောထား ထုတျပွနျကွညောခကျြနဲ့ ပိုစတာ ကွှေးကွျော သံမြားကို ကိုရီးယား၊ အင်ျဂလိပျ၊ မွနျမာ သုံးဘာသာနဲ့ ရေးသား ဖွနျ့ဝခေဲ့ကွပွီး ထုတျပွနျကွညောခကျြကို ကုလသမဂ်ဂရုံး တာဝနျရှိသူထံသို့ ပေးအပျခဲ့ကွပါတယျ။
Previous articleလန်ဒန်မြို့က ဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာ အက်စ်ဆစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရ
Next articleမြဝတီ ကော့သောင်းနဲ့ တာချီလိတ်မြို့တွေမှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေ ဖွင့်